VLC 4.0 inosvika gore rino, uye dhizaini haizove chete nhau huru | Linux Vakapindwa muropa
Svondo yekupedzisira ndakanyora chinyorwa nezve VLC 4.0 mairi yakavimbisa kuti ichave yangu default multimedia player kune zvese kana ini ndichikwenya zvimwe zvinhu. Chikonzero ndechekuti, kunyangwe VLC ichizivikanwa zvirinani nekuve vhidhiyo inoridza, inotibvumidzawo kuronga raibhurari yedu yemimhanzi, asi izvi hazviratidzike zvakanaka muv3.x. Iyo inoshamisa mune yechina vhezheni, asi iyo dhizaini shanduko mune iyo mimhanzi raibhurari inokunda zvakanyanya haizove iyo chete yakakosha ruzivo.
Ichokwadi ndechekuti ruzivo urwu rwuri kutenderera pamambure kwemazuva mashoma, asi pachangu ndakanga ndisina kusarudza kuiburitsa nekuti hapachina zuva rekuburitsa riri kuona. Hongu zvinozivikanwa izvo ichasvika muna 2021, gare gare, asi kwete riini. Muchokwadi, kana tikaenda kuSnapcraft, kubva patinogona kuisa yekutanga vhezheni, iyo "Edge" ichiri kuoneka senge nyowani vhezheni yeVLC 4.0, ndiko kuti, kana pasina munhu anonditsiura, haisati yapinda muchikamu che beta.
1 VLC 4.0 ine zvemukati zvemukati?
2 Zvimwe zvitsva
VLC 4.0 ine zvemukati zvemukati?
Nekuti hongu, yakasarudzika ruzivo ichave iyo shanduko yemagadzirirwo. Zvichava zvakaoma kujaira kwazviri, asi kwete zvakanyanya kune avo vedu vanoshandisa chinobata, nekuti zvinoita sekunge vanga vakavakirwa paiyo iOS / Android vhezheni kugadzira VLC 4.0. "Sutu" nyowani ichanyanya kucherechedzwa muraibhurari yemimhanzi, iko iko iko iko iko kuita kunge mimhanzi app, ine mabutiro nezvose, uye ini pachangu ndinoida, asi zvakare vhidhiyo inoridza, uye ndipo patinozofanirwa kuwana ndajaira, uye yakawanda ye.
Imwe pfungwa inofarira nharaunda ndiyo inozivikanwa mukati se Moviepedia Chirongwa, inoita kunge dhatabhesi yemafirimu uye zvinyorwa zvakaita seIMDb, iyo inogona kugadziriswa nekuchengetedzwa nenharaunda. Pamwe, uye aya mafungiro ako, mukana wekugadzira nekurodha manyorerwo akaverengerwawo muchirongwa ichi.
Parizvino tataura nezvenhau dzinokwezva zvakanyanya, asi VLC 4.0 ichauyawo nenhau idzi:
Input maneja newachi. Muchidimbu, izvi zvinotsiva runyorwa rwechizvino vhezheni, rwaibata odhiyo, zvinobuda muvhidhiyo, uye mamwe mabasa, zvichinyonganisa. Uye zvakare, wachi nyowani ichasanganisirwa, iyo inoshandisa iyo hombe wachi inofambisa mamwe mawachi eodhiyo, network, mavhidhiyo, nezvimwe.
Vhidhiyo kuburitsa uye rutsigiro rweVR uye 3D. Iyo vhezheni itsva ichawedzera rutsigiro rwevhidhiyo ye360. Tsigiro ichawedzerawo kune 3D odhiyo, uye zvese izvi zvichaiswa nekumisikidza.
Tsigiro yePnP kupa uye AirPlay kuburitsa.
Dash / Webm, HEIF, TML kutsigirwa kwemufananidzo.
Tsigiro yeAV1 uye WebVTT ichasanganisirwa.
Tsigiro yeSMBv2 / v3 uye iyo RIST protocol.
Parizvino, nzira yakanakisa yekuyedza VLC 4.0 iri kuburikidza yako snap package, sezvo zviri nyore kuiisa mumasisitimu anoitsigira uye, mukuwedzera, inoremekedza mutambi watakatogadza (pachave nevaviri). Kana ukadaro, ndinosungirwa kuraira izvozvo kuita kungave kwakaipa pakutanga, kunyanya kune avo vedu vane raibhurari yemumhanzi yemazhinji magigabytes. Kana iyi iri nyaya yako, zvinokurudzirwa kuisa VLC 4.0, kuitanga uye kuisiya kwenguva yakareba kuti upedze kunongedza, nguva inogona kunge iri maawa, kana saka yaive yekupedzisira nguva yandakaiyedza.
VLC 4.0 inosvika imwe nguva muna 2021 uye shanduko, mushure memakumi maviri emakore, ichave inoshamisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » VLC 4.0 inosvika gore rino, uye dhizaini yacho haizove chete nhau huru
Chavanofanirwa kuita kupedzisa zvinhu uye kwete kuvasiira hafu. Vakaburitsa rutsigiro rweChromecast kare kare asi zvinyorwa zvidiki hazvishande neChromecast uye neplex uye videostream vari kuenda zvakanaka, ndiko kuti, idambudziko reVLC. Ini ndinoona mimhanzi kunge bullshit, tingave tichida kana kwete, isu tagara tichishandisa vhidhiyo vatambi vevhidhiyo, sezvo zviri izvo zvavari uye maodhiyo ekuridza odhiyo, nekuda kwechikonzero chakafanana chavari icho. Mutambi anoshanda anotonhorera kune vese, haapo, uye haazovepo, uye kunyangwe VLC, kunaka kwayo kwagara kuri vhidhiyo, unogona kuishandisa kumimhanzi kubva mushanduro yechina, hongu, asi zvirokwazvo haizombove yakafanana mimhanzi yezvakanaka iyo chete inoridza mutambi, zvine musoro kufunga. Mota imota uye mudhudhudhu mudhudhudhu, vanoshanda chinangwa chimwe chete, kutenderera, nezvimwe, asi havana kufanana uye sekuziva kwangu, hapana mota-midhudhudhu kana midhudhudhu-mota, pane mota uye kune midhudhudhu. Hupenyu ndozvichaitwa ...
Zvakanaka, tichaona izvo zvigadziriso. Ini ndinoda kuona mavhidhiyo mune ese mafomu uye VLC pamwe neSMplayer ndiyo yandinoshandisa pachinangwa icho.